Maxaad ka taqaan cudurka Ebola? | Sahan radio
Muxuu Cudurka Ebola u yahay Qatar
Cudurka Ebola ee ka dilaacay galbeedka Afric,a ayaa ilaa iyo haatan ah kan ugu halista badan.
Sida laga soo xigtay Qaramada Midoobay ku dhawaad 887 qof, ayaa u dhintay cudurka,
Dhaqaatiirta, ayaa dadaalaysa in la xakameeyo cudurka saraakiisha caafimaadka dalalka Guinea, Liberia iyo Sierra Leone.
Ebola waa xanuun Virus ah oo calaamadaha lagu garan karo ay ka mid tahay: 1) Qandho deg deg ah, 2) tabardaro daran, 3) murqaha oo xanuuna 4) iyo cunaha oo xanuuna qofka. Sida laga soo xigtay hey’adda caafimaadka adduunka WHO, taasi waa marka uu bilowga yahay. Marxaladda xigta waa 1) matag isbadajoog ah, 2) fuuqbax iyo mararka qaar dhiigbax gudaha iyo dibadda ah.
Cudurka waxa uu bani’aadamku ka qaadaa markii uu la xiriiro xayawaanka qaba cudurka sida daanyeerka sida Jimbansiiga, xayawaanka kibiliga iyo gari-nuugta.
Xitaa qofka u geeriyooda Ebola meydkiisa ayaa halis ah oo cidii u dhawaata ay ka qaadi kartaa cudurka.
Muddada cudurka ku qarsan yahay jirka qofka, ayaa noqon karta inta u dhexeysa labo maalin ilaa iyo seddax todobaad, waxaana adag in la ogaado.
Cudurkan, oo ku kooban Africa ayaa hal kays, waxaa lagu arkay dalka Philippine.
Shaqaalaha caafimaadka qatar ayay ku jiraan hadii ay la macaamilaan bukaanka, iyagoon qaadan taxadar dheeraad ah oo ay uga fogaanayaan qaadista cudurka.
Xagee ku dhuftay cudurka?
Sida ay sheegtay WHO cudurka Ebola ugu horeyn, wuxuu ka dilaacay tuulooyinka fog ee Africa-da dhexe iyo tan galbeed una dhaw keymaha kuleylaha.
Markii ugu horeysay waxaa lagu arkay cudurka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo (DRC) sanadkii 1976dii, kaddibna wuxuu u sii gudbay dalalka Uganda iyo Sudan.
Cudurka haatan waxa uu ka bilowday Guinea oo uusan horay uga dilaacin taasina ay ka dhigeyso mid aan caadi aheyn.
Dilaacidda cudurka Ebola ee Africa-da galbeed ee la soo saaray 4 August Xigasho: WHO.
Taxadar ceynkee ah ayaan qaataa?
WHO, waxay ku talineysay inaad ka fogaato xiriir aad la sameyso bukaanka cudurka Ebola. Ha taaban waxba, sida shukumaanada la wadaago kuwaasi oo noqon kara kuwa cudurka lagu kala qaado meelaha guud.
Shaqaalaha xanaanada waa inay xirtaan qalabka ka hortagga sida gloves-ka gacmaha la gashto iyo qalabka kale ee wajiga lagu xirto, waana inay joogto u dhaqaan gacmahooda.
Maxaa laga qaban karaa hadii uu cudurku igu dhaco?
Waa inaad is dadka ka fogaataa, oo aad raadsataa kaalmo caafimaad. Bukaanka wuxuu haysta fursad wanaagsan uu ku badbaadi karo hadii uu helo daawo dhaqso ah. Ma jiro wax tallaal ah inkastoo tijaabo jirto.
Bukaanada si joogto ah, ayey u fuuq-baxayaan waa inay cabaan biyaha leh cusbada ama ay xididka ka qaataan faleembo.
Dadka uu soo ritay cudurka 50% illaa iyo 60% ayaa u geeriyooda, lamana oga wax keena in dadka qaar ay ka soo kabtaan halka kuwa bandanna aysan badbaadin.